Sida loo rogo ama Windows Movie Kan sameeyey Faylal ay si AVI si fudud oo dhaqso
> Resource > Windows > Sida loo rogo ama Windows Movie Kan sameeyey Faylal ay si AVI
Waa nixi in Windows Movie Kan sameeyey dhoofisa kaliya video files si wmv. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha badankooda, waxaad u baahan tahay in aad files mashruuca Kan sameeyey Windows Movie la badbaadin karaa in qaab AVI. Sababta tani waa la kala duwan laga yaabaa. Tusaale ahaan, AVI lagu dheeraad ah oo si weyn loo isticmaali karaa on ciyaartoyda la qaadi karo oo aad u baahan tahay inuu ciyaaro ka Windows Moive files mashruuc ku saabsan ciyaaryahanka AVI taageerto. Xaaladdan oo kale, waxaad u leedahay in loogu badalo files Kan sameeyey Windows Movie in AVI adigoo isticmaalaya Windows Movie Kan sameeyey weyn oo avi Converter.
Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) ka dhigaysa in ay si dhakhso ah oo sahlan oo ha idin ​​shaqo taas loo sameeyo. Just ka dib markii qasabno yar oo sahlan in app this, waxaad ka heli kartaa la doonayo Windows Movie Kan sameeyey files mashruuc aad qaab AVI. Tan ugu muhiimsan, barnaamijka weyn mana xaqiro doonaa tayada Windows Movie Kan sameeyey video files. Hadda, waxaan ku tusi doonaa talaabooyinka faahfaahsan ee tutorial soo socda.
1 badbaadi aad files Kan sameeyey Windows Movie sida video files
Windows Movie files mashruuca Kan sameeyey ma la furi karo in kasta oo Chine kale, iyo video Converter tani waa laga reebo lahayn. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay badbaadin Windows files Kan sameeyey Movie sida video files, si aad u isticmaali kartaa oo suurad aad video Converter in iyaga loogu badalo in ay qaab kale oo aad jeceshahay.
Burcad Window Kan sameeyey Movie, furo file mashruuca Kan sameeyey Movie Windows, ka dibna "Save si aan computer" si ay u dhoofiyaan sida file video ah.
2 Import video files si video Converter this
Next, aad u baahan tahay si ay u dajiyaan badbaadiyey video files si Wondershare Video Converter u diinta video. Orod video Converter this, iyo ka badan riix badhanka on dhinaca kore ee bidix ee interface in uu shuban-ka badbaadiyey kaliya video files ka your computer si app this.
3 Dooro AVI sida qaab wax soo saarka
Hit image qaab dhinaca midig ee interface ka, ka dibna ku soo saarka liiska pop-up qaabka, waxaad riixi kartaa tab Qaabka ugu sarreeya, ee soo socota, galaan category Video iyo waxaa dooran AVI.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doorato qaar ka mid ah qalabka sida qaab wax soo saarka, files saarka wuxuu noqon karaa mid si buuxda u la jaan qaada qalabka. Markaas, aad wareejin karaan faylasha wax soo saarka si ay u qalabka lagu raaxaysto.
4 Beddelaan Windows Movie Kan sameeyey si AVI
Hadda, waxa aad bilaabi kartaa si loogu badalo aad Windows Movie files mashruuca Kan sameeyey si AVI ay si toos ah ugu dhufatey "Beddelaan" button rukun ee hoose-saxda ah ee suuqa kala this. Waa intaas.
Muddo ka dib, ka tago si uu folder saarka this app ee in la helo kuwaas oo ku badaley files AVI loo isticmaali. Ha ogaado waddada file wax soo saarka? Just u hubiso hoose ee suuqa kala this. Qaabka ugu dhakhsaha badan waa in ay halkaas si toos ah guji ikhtiyaarka Folder Open.